I-North Star Cabin, i-Luna Intente kunye ne-Retro Caravan - I-Airbnb
I-North Star Cabin, i-Luna Intente kunye ne-Retro Caravan
Igumbi lakho lokulala e inqugwala sinombuki zindwendwe onguAmanda
Indlu yamaplanga ekuthiwa yiNorth Star iyafumaneka ukuze iindwendwe zibuke zize ziphumle kamnandi, nto leyo eyenza kube mnandi ukukhempisha. Indlu yamaplanga ineefestile ezinkulu, iifestile, ukufudumeza kunye neglasi enamavili. Le ndawo ijonge phezu kweendawo ezintle ezivulekileyo kunye namahlathi, kunye nesibhakabhaka esikhulu sokujonga iinkwenkwezi kunye nokufumana ukhuthazo. ICaravan yakudala kunye nentente ye-luna inikezela ngobumfihlo, ikhitshi kunye nokusetyenziswa njengendawo yokuhlala. Ibekwe ecaleni kwendlu yamaplanga, le nto inika indawo eyandisiweyo kunye nendawo eyaneleyo yokuphumla.
Indlu yamaplanga yinjongo eyakhiwe kuyo, umbono owenziwe ngumzobi u-Amandaregor. Iglasi yiglasi enamavili, indlu yamaplanga igciniwe kakhulu ibe yinjongo eyakhiwe ngebhedi (nceda uqaphele ukuba ii-intshi eziyi-2 zomatrasi zilahlekile ngenxa yophahla oluthambekileyo ngoko kungcono ukuba ngaphantsi kweenyawo eziyi-6. Ukutya kunokuphekwa kwi-heater hob yegesi okanye i-barbecue, (i-plus izisa ipetroli okanye uthenge egaraji xa usendleleni) kukho ifriji encinci kwindlu yamaplanga, i-ecology heater kunye neketile. Kukho umngxuma womlilo wokufudumala ngakumbi emnyango. Indlu yangasese ingasemva kwendlu enkulu ibe ingangena xa ungena endlini.
Le ndawo yenza kubekho ubuchule, ukuphumla, ukuphumla, ukubuyisela, ukuhlaliswa wedwa, ukonwaba kunye nokukhempisha. Indlu yamaplanga yindawo etofotofo, efana nendawo ephithizelayo edibene ne-caravan yakudala kwaye inendawo eninzi. ICaravan okanye intente ingasetyenziswa njengekhitshi negumbi lokuhlala. UNick ogama luthi 'ilali' iindawo ezahlukeneyo zenza kube lula ukuphumla nokusondelelana nendalo.
Ukuba ufuna ukumema abahlobo ngamnye uza kubhataliswa i-40 ngaphezulu ngosuku. Nceda undithumelele umyalezo ngaphambi kokuba ndifike, indalo inokuthatha abantu abathathu abathandanayo kodwa kubalulekile ukuthetha ngale nto ngokweenkcukacha ukhumbule ukuba kukho indlu yangasese enye. Le ndawo ayibafanelanga abantwana kodwa ndithumelele umyalezo ukuze ndihlole ukuba uvakalelwa kukuba ungathanda nyhani ukuza nomntwana omnye okanye ababini. Zizinja ezincinci eziziphatha kakuhle kuphela ezamkelekileyo kodwa nceda uthethe nam kuqala njengoko kungekho mida kwaye ndinenja.
Ukuba ungathanda ukuphumla ngobuchule - ndinikezela ngokufunda umphefumlo/umphefumlo kunye nohambo olunzulu lwee-hypnotheliday, ukuphinda uhlaziye, ukufundiswa, ukuqeqeshwa kwezoshishino/ukufunda, ukukhangela ukukhanya okuthandekayo. Ndenza amava ngokubonisa ubugcisa, unyango lobugcisa kunye nokucamngca. Ndingumzobi osebenza nabantu abambalwa ibe ndingumgcini wabantu, ubugcisa neendawo. Ukuze uthenge ubugcisa okanye ujikeleze istudiyo nceda ubhukishele ukutyelela istudiyo.
Kukho iindlela ezininzi zokuhamba emahlathini, kunye nezilwanyana zasendle kuquka izilwanyana zasendle, iimpungutye, iimpungutye, amahashe kunye neekiti. Indlu yamaplanga isecaleni ibe ithembele kuphela kwindlu yangasese ngasemva kwendlu, isiya kwindlu enkulu. Ishawa ikwindlu ephambili ibe ingasetyenziswa.
Ngokuqhelekileyo ndiza kusondela ukuze ndiqinisekise ukuba yonke into ihamba kakuhle!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Checkendon